Al-Shabaab oo xayiraad ku soo rogtay degmada Luuq
Wararka ka imaanaya degmada Luuq ee gobalka Gedo ayaa sheegaya in kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab ay billaabeen inay degmadaas geliyaan xaalad go’doomin ah.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa inuu xiray waddooyinka soo gala degmadaas, iyadoo wararku intaas ku darayaan in xubnaha arxanka daran ee ururkaas ay dib u celiyeen dhammaan gaadiidka badeecooyinka ee muhiimka u ah dhaq-dhaqaaqyada ganacsi.
Arrintaan uu al-Shabaab ku dhaqaaqay ayaa la sheegay inay timid kaddib markii maamulka degmada Luuq uu ka horyimid amar uu ururka kusoo rogay oday-dhaqameedyo inay tagaan goob uu ururka ka arrimiyo.
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab inta badan ma eego danta guud ee shacabka oo wuxuu doono ayuu iskaga dhaqaaqaa isagoon eegeyn wixii dan ugu jiro dadweynaha.
Ururkaas diinta islaanka ka been sheegay wuxuu hadda ka hor burburiyay waddooyin ku yaallaan gobalka bari kaddib markii uu dagaal dhex maray isaga iyo ururka ISIS, taasoo sababtay in degmooyin badan ay halkaas ku go’doomaan.
Duqeyn lagu dilay hoggaamiye sare iyo shaki ka dhex bilowday Shabaab
Duqeyn dhawaan ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa amniyaadka al-Shabaab iyo darawalkiisii, xilli ay ka bexeen degmada Jilib kuna wajahnaayeen deegaan kale oo hoos taga degmadaas, sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya.
Saraalkiil ka tirsan dowladda, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay geerida sarkaalkaas oo magaciisa lagu soo koobay Asad, waxaana la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ugu saameeynta badan qeybta amniyaadka ee al-Shabaab.
Sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in xubnaha al-Shabaab ee lagu dilay duqeynta dhawaan loo magacaabay amiirka guud ee amniiyaadka Al-Shabaab.
Warbixinta lagu xaqiijiyey dilka horjoogahaan ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey inuu ka soo dagaalamay qaar ka mid ah waddamada caalamka, sida Afgaanistaan iyo Ciraaq.
Dhinaca kale wax yar uu ka dib markii ay dhacday duqeyntu ayaa xarun ku taal gudaha degmada Jilib oo shir ugu soo gaba gaboobay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab ayaa waxaa laga maqlay is-rasaaseyn xoog leh oo u dhaxaysay dagaalyahano ka wada tirsan Al-Shabaab, kadib markii sida la sheegay ay kala shakiyeen.
Duqenta iyo dilka horjoogahaan sare waxay dhalisay in xubnaha al-Shabaab ay dhexdooda iska shakiyaan iyadoo lagu soo warramayo in muddo yar kaddib markii duqeyntaasi dhacday ay xubnaha al-Shabaab dhexdooda is rasaaseeyaan kaddib markii ay kala shakiyeen.
Iska hor imaadkaas oo mudo socday ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen ilaa shan dagaalame oo uu ku jiro sarkaal goobta ku sugnaa oo la sheegay inuu al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka istiraatiijiyada xogta.
Sheekh Umal oo sharraxay fikirka al-Shabaab iyo salkiisa
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuwa ugu caansan uguna aqoon badan wuxuu dhawaan sharraxay fikradaha diimeed sida kuwa al-Shabaab ee qalloocan salkooda iyo qaabka ay u bilowdaan.
Hadal uu dhawaan ka jeediyay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed ee SNTV ayuu sheekhu wuxuu ku sheegay in fikradaha diimeed ay ka dhashaan xad-dhaaf iyo xuduudda diinta oo la dhaafo oo xag-jirnimo la aado.
Wuxuu kala saaray noocyada kala duwan ee fikradaha xag-jirnimada kuwaasoo uu kala sheegay in dadka qaar xad-gudubka uu ka galo iimaanka, kuwa qaarna uu ka galo cibaadaadka halka kuwa kalana uu ka galo fikirka.
Wuxuu sheegay in fikirka xag-jirnimada uu ugu daran yahay midka iska banneystay daadinta dhiigga muslinka, isagoo hadalkaas ku wado ururka iska banneystay daadinta dhiigga Soomaaliyeed ee al-Shabaab.
“Fikradaha xag-jirnimada waxaa ugu daran midka caqiidada gala, midka gaaleysiinta ummadda iyo midka daadinta dhiigga muslimiinta. Waana kii nabiga (scw) uu tilmaamay in dadka fikradaha noocaan leh ay ugu shar badan yihiin dadka ku nool dunida, waa kuwii nabiga uu dhahay meel alle meel aad ku aragtaan laaya, waa khawaarijtii,” ayuu yiri sheekhu.
Wuxuu sii sharraxay sababta nabigeenna uu dadkaas ugu tilmaamay inay yihiin dadka ugu shar badan dunida sababtoo ah waxay diinta ka saareen dadkii muslimiinta ahaa iyo dhiiggii ummadda oo ay banneysteen.
Wuxuu sheegay in afkaarta noocaan ah lala dagaallamo oo nabigeenna uu ina amray inaan la dagaallanno afkaartaas. Wuxuu intaas raaciyay in sababta loola dagaallamayo aysan aheyn iyadoo wadaaddada ay iska raacayaan hadalka dowladda balse ay tahay mabaadi’ diineed oo Quraanka iyo sunnada ayaa sheegeen in dadka leh afkaarta xagjirnimada lala dagaallamo.
“Gaalnimo marka laga soo tago, dambiga ugu weyn xagga Ilaahey waxaa ugu weyn dhiigga muslinka oo si xaq-darra ah loo daadiyo, wax ka weyn ma lahan. Culimada muslimiinta oo dhan ayaa isku waafaqsan in daadinta dhiigga muslinka uu yahay dambiga ugu weyn,” ayuu yiri sheikh Umal.